विप्लव नेकपाको नेपाल बन्द आह्वान : कुन प्रदेशमा कस्तो प्रभाव ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV विप्लव नेकपाको नेपाल बन्द आह्वान : कुन प्रदेशमा कस्तो प्रभाव ? | Sagarmatha TV
काठमाडौं। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनस्टि पार्टीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको राजधानी काठमाडौंमासहित देशभर प्रभाप परेको छ।
बन्द आह्वानले काठमाडौमा नियमित भन्दा कम सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन् भने सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुको चाप बढी रहेको छ। सरकारले भने निर्वाध रुपमा यातायात सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।
काठमाडौंका मुख्यमुख्य चोकमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ। लामो दुरीका सवारी साधन भने चलेका छैनन्। उपत्यका बाहिर भने बन्दको आशिंक प्रभाव परेको छ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बम तथा शंकास्पद बस्तु फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। आज बिहान प्रदेश-१को झापास्थित कन्काई पुलमा बम फेला परेको छ। बमलाई नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश-५ को प्युठानस्थित प्यूठान नगरपालिका-४ जुम्री बसपार्कमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक निर्मल बुढाथोकीले उक्त शंकास्पद वस्तुलाई डिस्पोज गरिएको जानकारी दिए।
प्रदेश-५कै अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाँउपालिका वडा नम्वर ५ र ७ नजिक तथा मालारानी १ को छेडाठाँटीमा गरि तीन ठाउँमा बम फेला परेका हुन्। नेपाली सेनाको टोलीले सुरक्षित स्थानमा डिस्पोज गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानाकारी दिए।
त्यस्तै बन्दका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा सवारी साधन चलेका छैनन्। शैक्षिक संस्था पनि पूर्णरुपमा ठप्प रहेका छन्। आज बिहान कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका कार्यालयमा बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै अछामका पन्चदेवल विनायक नगरपालिका ३ र ढकारी गाउँपालिका ५ को वडा कार्यालयमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
यता गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा तीनवटा संकास्पद बस्तु फेला परेको छ । विजयपुरको पुल वारी ओरालोमा भेटिएको प्रेसरकुकर बमलाई नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिका लेखनाथको हमाल चोकमा भटिएको सकेट बम सेनाले डिस्पोज गर्‍यो । पोखरा १७ ड्यामसाइडमा पनि शंकास्पद बस्तु भेटिएको प्रहरीले जानाएको छ ।
गत बिहीबार सर्लाहीमा प्रहरीको गोलीबाट पार्टी जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु भएपछि त्यसको विरोधमा विप्लव नेकपाले आज बन्द आह्वान गरेको हो।